Oge m na Dubai | Ọrụ dị iche iche - Ọrụ - Njem enwerela onwe m ọfụma ịbịa na Dubai ugboro abụọ!
Oge m na Dubai - Dubai City Company
Enwere m ihe ndabara ezuru ileta Dubai Ugboro ugboro abụọ na 2013 na otu oge na 2016 na ma oge nleta m bụ maka ụbọchị 10. M nọrọ a oge mara mma na Dubai ọtụtụ ncheta ọtụtụ ihe dị iche iche banyere obodo m ka na-echeta oge niile.
M nọrọ ebe ahụ nleta m bụ naanị maka ezumike m nyochakwara Abu Dhabi, Sharjah, na Fujairah na ihe kacha amasị m gbasara obodo bụ gburugburu ebe ị na-enwe ọ andụ na obi ụtọ...
Site na onye taxi taxi rue na klas onye na-ahụ maka onye isi onye ọ bụla nwere afọ ojuju na ndụ ha na-ebi, ọ dịghị onye ihere na-arụ ọrụ ma na-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dịka ọrụ ha.
Ị Kwesịrị Ịmalite Dubai!
Enwere m ọgba aghara mgbe m gara maka njem dị iche iche na Dubai desert safari na ọ bụ ihe dị egwu na-enweghị ihe mgbochi ma na-agba agba agba agba ma na-enyocha ebe ndị ọzọ Mmiri aquarium nke Dubai n'okpuru mmiri zoo. N'aka nke ọzọ, jikwaa hụ Ferrari ụwa, ogige mmiri Laguna na Burj Khalifa na Dubai Creek.
Yabụ, na-ekwukarị, m na-echeta isi iyi a na-ahụ n'okpuru Burj Khalifa nke ahụ Oge echefughi maka m Dubai, n'adịghị ka mba Arab ndị ọzọ, enweghị ọtụtụ iwu siri ike ụmụ amaala si n'ofe 80 agbụrụ bi na Dubai na Dubai na-emepe ọnụ ụzọ maka mmadụ niile.
Ya mere, ọ bụrụ na ị njikere ịrụ ọrụ... I kwesiri iche na obodo anyi a huru n'anya bu otu n'ime ihe kacha mma ichota ugwo oru.
Dubai A makwaara maka ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha mma sitere n'ụwa niile dị njikere ịmụ akwụkwọ na Dubai yabụ kedu ihe ị na-eche maka na agbanyeghị na nwa akwụkwọ gụchara akwụkwọ na-achọ ọrụ Dubai nwere ihe niile maka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike lekwasị anya n'ihe gị…
Oge m na Dubai, Onye na-eso ụzọ anyị na-ezigara anyị Ama ọ gara nleta obodo Dubai ugboro abụọ ugboro azụ na 2013 ma n'otu oge na 2016 ma ọ hụrụ ya n'anya !.
Citylọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.